Miomana sy mifampizara risotto - izany no mahatonga ny risotto hahomby
Miomàna tsara risotto Sakafo sakafo
Inona no azo ampitaina amin'ny fanomanana risotto?
Fahadisoana hisorohana ny fanomanana risotto
Tian'ny olona maro ny manandrana sakafo vaovao hiverimberina mba hampisy karazany maro amin'ny fahazarana mahazatra azy isan'andro. Fialam-boly tena malaza any amin'ny lakozia tsy miankina ary koa ao amin'ny trano fisakafoanana dia risotto. Ny lovia varimbazaha dia azo lazaina ho malaza satria fotsiny hoe afaka miovaova be dia be sy manitra miaraka amin'ny zavatra rehetra.
Inona no atao hoe risotto?
Risotto dia avy any avaratr'i Italia ary sakafom-bary mozy. Ny risotto tsara dia marefo, fa ny tsy fitovian'ny vary dia mbola "al dente".
Ny risotto nentim-paharazana miaraka amin'ny holatra, herika vaovao ary Parmesan
Ny fiomanana fototra dia tsotra: eto, ny vary tsy voamaivana dia zara raha misy tongolobe sy menaka kely na menaka ary atody ao amin'ny raman-pirazanana mandra-pahavitrihana ny lovia.
Mazava ho azy fa tokony hokarakaraina ihany koa ny fikarakarana vary. Tsy ny karazan-tsakafo rehetra azo ampiasaina ho an'io fikarakarana vary tsara indrindra io. Matetika dia ampiasaina ny vary gera, satria mamoaka ranon-tsakafo ampy tsara izy io, izay tompon'andraikitra amin'ny crème texture.
Ny fanondranana varimbazaha kosa dia tsy mety mihitsy, satria mahandro mora loatra sady tsy mahavita azy io amin'ny farany. Ny Risotto dia azo ampiasaina ho toy ny dingana lehibe na miaraka amin'ny sakafo maromaro.
Afaka miomana amin'ny fomba maro samihafa ny risotto. Ny sakafo matsiro amin'ny sakafom-bary dia mazava ho azy ihany koa ny vary varimbazaha voankazo, tongolo gasy, ary izay te haka divay kely ankoatra ny rano. Ny ambiny dia mazava ho azy fa resaka tsiro, satria afaka manome ny ankamaroan'ny ingredients ao amin'ny risotto.
Adin'ny afo ary hikolokolo mofo
Ny tena mahazatra dia ny Parmesan Risotto. Ho an'ity fikasana ity dia aroso ny lovia araka izay voalaza etsy ambony. Raha vao vita ny varimbazaha ary ny maina dia atsangano, ampio ny dibera sy Parmesan amin'ny vary. Efa nisafidy Parmesan risotto matsiro ianao.
Na dia misy fisidinan'ny risotto aza dia voafidy ho toy ny làlambe maina na sombin-tany. Eto koa no manomana ny zavatra rehetra araka ny drafitra sy ny hatsembohana ny holatra miaraka amin'ny tongolobe ao anaty fonosana fanampiny. Avy eo dia omenao ny zava-drehetra eo ambanin'ny masinina. Azo ampiasaina koa ny parmesan sy holatra, izay mazava ho azy fa miankina amin'ny fanandramanao manokana.
Iray amin'ireo fahadisoana lehibe voalohany amin'ny fiomanana ny hoe ny vary fotsiny dia efa mahandro loatra. Izany fotsiny no mahatonga ny masira ho mena. Na izany aza, ny vary dia mbola tokony "al dente" mba hahafahany mamelatra ny aroma feno sy ny tsiron'ny entana hafa.
Ny vary risotto dia tsy tokony hosasana mialoha koa, raha tsy izany dia hamoy ny heriny izy ary tsy ho vita ny lovia manontolo. Ankoatr'izay, tokony tsy hiala amin'ny fatana mihitsy aza ianao, satria afaka mandoro haingana ny vary ary mila mifampidinidinika.
Ahoana no hanandramana tsara ny divay?
Fikarakarana zazakely - Manao tsara
Mianara tsara - Ampitomboy ny antony manosika
Mianatra tsara - satria mahafinaritra ny fianarana
Mianara tsara amin'ny hevitry ny saina
Mianara amin'ny zotram-piainana rehetra
Mianatra tsara - dia afaka mianatra ny zava-drehetra ny rehetra
Saffron | Sakafo mandritra ny sakafo
Sakafo - Zana-ketsa an-toerana rehefa mahandro
Olon-menaka kokônina rehefa mahandro
Zarao ny tranokala fanangonana